Umaki: ukucindezelwa kwevidiyo | Martech Zone
Maka: ukucindezelwa kwevidiyo
Wondershare UniConverter: Bulk Isiqophi Ukunquma, Ukuguqulwa, Ukucindezelwa, Nokuthuthukisa
Njengoba abakhangisi besebenza nenqwaba yamazinga wevidiyo - kusukela kuzinhlobo zamafayela eziphequluli ezihlukene, ubukhulu beziteshi ezahlukene, kanye nokucindezelwa ukuze usakaze kahle, ukusebenza ngeplatifomu yokuhlela ividiyo ukuze ukhiphe amafayela adingekayo kungaba nzima. Umkhiqizo umhlabeleli futhi ezingabizi kakhulu ukuthi ngike ngasebenza ngokwenza lokhu Wondershare UniConverter. Njengesibonelo, ifemu yami ithumela isitolo sakwaShopify Plus sekhasimende lemfashini njengamanje futhi sikufake phakathi.
Izici Ezinomthelela Kushesha Kangakanani Ikhasi Lakho Lilayishe Kuwebhusayithi Yakho
Besihlangana neklayenti elinombono namuhla futhi besidingida ukuthi yimiphi imithelela yejubane lokulayisha iwebhusayithi. Kunempi eningi eqhubeka kwi-Intanethi njengamanje: Izivakashi zifuna okuhlangenwe nakho okucebile okubukwayo - ngisho nasekubukisweni kwe-retina ephezulu. Lokhu kushayela izithombe ezinkulu nezinqumo eziphakeme eziqhakaza osayizi bezithombe. Izinjini zokusesha zifuna amakhasi asheshayo we-ultra anemibhalo emihle esekelayo. Lokhu kusho ukuthi kusetshenziswa amabhayithi abalulekile embhalweni, hhayi ezithombeni.